Global Voices teny Malagasy » Ireo mpamatsy madinidinika sy ireo goavana mpanome baiko: manaiky ny filàna fampihavanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Febroary 2020 13:27 GMT 1	 · Mpanoratra Mathieu Carrere Nandika avylavitra
Sokajy: Frantsa, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2014)
Ozinina mpikirakira akora simika ao Nièvre (France). CC-BY-2.0
Tsy nisy mihitsy ny fifankatiavana lehibe teo amin'ireo goavana mpandray fanapahankevitra ary ireo orinasa madinika sy salantsalany. Anatinà tontolo iray isian'ny krizy ary mazava loatra fa fihenàn'ny sarany, matetika ireo madinika mpanao fiantohan-draharaha no tsinontsinoavin'ireo sampana misahana ny fividianana entana any anatin'ireo orinasa vaventy. Mandrakariva, ela be tsy araka ny tokony ho izy ny fetra fandoavana ny vola ary indrindra indrindra, matetika ireo madinika mpamatsy entana no avy hatrany dia ahilik'ireo andianà mpanome baiko. Filàna tena maika ny famerenana ireny fifandraisana ireny, satria, raha miharatsy, dia ho lasa sakana iray fanampiny amin'ny resaka fahafahana mifaninana ho an'ny indostria frantsay izy ireny.
Manoloana ny fahitàna hoe mbola misy hatrany ny fiharatsian'ny fifandraisana eo amin'ny samy orinasa, tamin'ny May 2013 i Martial Bourquin, loholona avy ao Doubs sady parlemanta mamita iraka eo anivon'ny lapan'ny praiminisitra, dia namoaka tatitra iray nomena ny lohateny hoe « Ireo fifandraisana eo amin'ny mpanome fanapahankevitra sy ireo mpianto-draharaha eo amin'ny sehatry ny indostria ». Tanjona ny hampifandanja ireny fifandraisana ireny amin'ny alàlan'ny rafitra iray araky ny lalàna sy ny fepetra nasiana fanavaozana, satria izy ireny no mandrafitra ny fahafahana mifaninana ho an'ny indostria frantsay
Fa araka ny vaovao farany azo, dia gidraka foana, tsy mitsahatra ny miharatsy ny fepotoana fandoavana ny vola . Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny Altares — Dun& Bradstreet, natao tamin'ny 2013, dia 30,6 % monja amin'ireo orinasa frantsay no nanefa ny volan'ireo mpamatsy azy tamin'ny andro nifanarahana, raha 32,3 % kosa izany herintaona talohan'io.
Lalàna azo idifiana
« Tato anatin'ny roa taona, hita nirongatra ny ady tsy misy fotony foronin'ireo tompon-trosa mikasa ny handingana ny lalàna LME », hoy ny fanazavàn'i Denis Le Bossé, filohan'ny ARC, kabinetra mpitaky trosa . Napetrak'io lalàna io, efa tamin'ny 2008, ny fetra 30 andro ho fandoavana amboniny (azo ampiharina raha tsy nisy fifanarahana hafa nifamatorana) ary fetra roa fara-fahelany 45 andro faran'ny volana sy 60 andro feno. Raha tamin'ny voalohany io lalàna io nahafahana nampihena be ny fepotoana fandoavana ny vola, ireo ratsy fanefàna trosa kosa nahita fomba hialàna aminy ary dia kofona teo ity hetsika fampihenàna ity.
Tao anatin'ny tatitra nataony, nanolotra hevitra i Martial Bourquin ny hanafoanana ny iray tamin'ireo fepotoana farany ambony ireo mba hanamoràna ny fanisàna ireo fepotoana. Saingy tsy nisy niraharaha ny sosokeviny.
Nisy fitarainana iray hafa manana ny lanjany nalefa ho an'ireo mpanome baiko, satria midona hatrany amin'ny loharanon'ny tsena : fironana izoran-dry zareo ny fanilihana ireo PME tsy ho anatin'ny lisitr'ireo mpamatsy goavana an-dry zareo, nataony indrindra hisorohana ny ho fiankinandoha ara-toekarena mety hanimba ny mpanjifa sy ny mpianto-draharaha. Raha ara-drariny io antony io, tsy tokony hatao fialàna bàla ho an'ireo orinasa goavana tsy mahefa ny andraikiny. Tamin'ny Febroary 2010, nosoniavin'ny minisitry ny toekarena, Christine Lagarde, ny sata iray momba ny fanao tsara tokony hisy amin'ireo goavana mpanome baiko sy ireo PME mba hampiroboroboana ny fiantohan-draharaha miaraka amin'ireo mpamatsy manana habe salantsalany.
Avy any amin'ny Sodexo hatrany amin'ny ERDF : ireo orinasa manome vintana ny mpamatsy madinidinika
Ireo orinasa toy ny Sodexo France, nanasonia ilay sata, dia mampiroborobo ny fiarahana miasa amin'ireo mpianto-draharaha madinika, tsy mametraka mialoha ny tahan'ny fiankinandoha. Tamin'ny 2010, mpanao asatànana sy PME ny 1200 tamin'ireo 1900 mpamatsy nifampiraharahan'ny Sodexo France. Ho an'i Pascal Jeanson, tale miandraikitra ny fividianana sakafo ao amin'ilay vondrona trano fisakafoanana , « mba hakàna tombony amin'ny fihetsehana ara-potoana sy hampihenàna ny sandan'ny fitsinjaràna ato aminay, omenay tombony ny fanangonana entana eny amin'ireo mpamatsy akaiky anay ». « Napetrakay ho 25% ny tahan'ny fiankinandoha ara-toekarena mba hisorohana izay rehetra mety ho fahatapahana tampoka eo amin'ny tsena, hanimba ny fandraharahànay sy ireo mpiray antoka aminay. Natao rahateo mba hiantohana ny tsenanay ihany koa no anomezanay tombony ny fiarahana miasa amin'ireo fikambanana nasiônalin'ny PME », hoy izy nanamafy.
Tamin'ny 2014, tamin'ny ora natao hanoloana ny fitaovana fandrefesana tranainy ho fitaovana fandrefesana mampita hafatra, Linky, ezaky ny ERDF ny mba hahazoan'ireo orinasa madinika sy salantsalany ny anjarany ihany koa amin'ny tsena iray be tombontsoa. Ny 1 Septambra, nosoniaviny ny fifanarahana iray hiarahana miasa amin'ny CCI faritra avaratr'i Frantsa mba hanohanana ny firotsahan'ireo orinasa avy ao Nord-Pas-de-Calais tamin'ireo tolobidy nifandraika tamin'ny fanapariahana ireo fitaovana fandrefesana herinaratra Linky niisa 2.000.000 tao amin'ny faritra.
« Ny kinendry mahazatra amin'ny tolobidy toy itony, dia ireo orinasa vaventy », hoy i Mathias Povse, talem-paritry ny ERDF , “Fepetra ao anatin'ilay tolobidy ny fahaizana sady mandefa antso an-telefaonina, mangataka fotoana hihaonana, mametaka ilay fitaovana”, hoy i Marie Hennique manazava, tomponandraikitry ny fampiroboroboana ara-barotra ao anivon'ny CCI Avaratr'i Frantsa. Sehatra fihariana tsy voatery hisy fahazarana hiaraka hiasa hatrany ireo. Natao izay hihaonan-dry zareo. Ary i Mathias Povse no mamintina fa : “Eo io fiarahana miasa io mba hilaza amin'ireo PME tsy hanao ny habeny ho hisatra, na ny haben'ny tsena”.
Tombony ho an'i Frantsa ny manatsara ny lalàna manaraka ny sosokevitry ny loholona Martial Bourquin mba hamahàna ny olan'ny fetrandro fandoavana trosa. Zavamisy iray io izay tena manembantsembana an'ireo PME izay mazàna no marefo ny fitantana ara-bolany. Fa mbola zavadehibe kokoa, tsy maintsy atao izay hisorohana ny fanilikilihana avy hatrany ireo PME tsy hanana vintana amin'ireo fahafahana manao fandraharahàna. Mba hiantohana ny tsenan-dry zareo, tsy maintsy atsofok'ireo mpanome baiko ho ao anatin'ny tolobidin-dry zareo ireo PME. Ho tsara kokoa ny sela ifamatoran'ny fandraharahàna frantsay, ary miaraka aminy ny fahafahan'ireo orinasa hifaninana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/23/147049/
 Ireo fifandraisana eo amin'ny mpanome fanapahankevitra sy ireo mpianto-draharaha eo amin'ny sehatry ny indostria : http://www.economie.gouv.fr/files/2013_rapport_senateur_bourquin.pdf
 tsy mitsahatra ny miharatsy ny fepotoana fandoavana ny vola: http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/gestion-finance/dossiers/retards-de-paiement/les-cles-pour-se-faire-payer-dans-les-delais-101673.php
 Pascal Jeanson, tale miandraikitra ny fividianana sakafo ao amin'ilay vondrona trano fisakafoanana: http://www.decision-achats.fr/Decision-Achats/Article/Grands-comptes-PME-je-t-aime-moi-non-plus--36990-1.htm
 hanohanana ny firotsahan'ireo orinasa avy ao Nord-Pas-de-Calais : http://leblog.cotedopale.cci.fr/2014/09/02/les-cci-nord-de-france-en-partenariat-avec-erdf-pour-promouvoir-le-deploiement-des-compteurs-electriques-linky/
 hoy i Mathias Povse, talem-paritry ny ERDF: http://www.lavoixdunord.fr/economie/linky-de-nouveaux-compteurs-erdf-et-des-emplois-a-la-clef-ia0b0n2358995